Ole Gunnar Solskjaer Oo Taageerayaashiisa Ugu Baaqay In Ay Sabraan – Heemaal News Network
Ole Gunnar Solskjaer Oo Taageerayaashiisa Ugu Baaqay In Ay Sabraan
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku baaqay sabar isagoo doonaya inuu dib u dhiso kooxda, wuxuuna aaminsan yahay inay tusaale ka dhigtaan kooxda ay xafiiltamaan ee Liverpool.
Solskjaer ayaa cadaadis weyn uu saaran yahay ka dib markii ay labo guuldarro oo isku xigta ay ka soo kala gaartay Liverpool Burnley taasoo keentay inay lix dhibcood ka danbeeyaan booska loogu soo baxo Champions League.
United ayaa 33 dhibcood ka danbeysa Liverpool, Solskjaer ayaa sheegay inaysan jirin doonin xal degdeg ah oo lagu horumariyo qaab ciyaareedkooda.
Markii la weydiiyay haddii United ay u baahan tahay inay lacag xoogan geliso suuqa kala iibsiga, Solskjaer ayaa yiri: “Waxaan leenahay qaab aan wax u sameyno.
“Dabcan waad arki kartaa horumarka ay sameeyeen kooxaha kale. Jurgen Klopp afar sannadood yauu ka shaqeynayay dhismaha kooxdiisa, haatan cirka ayay marayaan. Dhowr jeer ayaan sheegay inaysan jiri doonin xal degdeg ah.
“Macquul ma ahan in sideed ama 10 ciyaaryahan la soo iibiyo hal suuq kala iibsi. Hal suuq kala iibsi oo fiican ayaa ina soo maray xagaagii sababtoo ah Janaayo waa mid dhib badan. Laakiiin waxaan isku dayaynaa inaan wax uun sameyno.”
Koox Hubaysan Oo Macalin Ku Dishay Degmada Burtinle Ee Gobolka Nugaal
RW Khayre Oo Dowladda Turkiga Uga Tacsiyeeyay Dad ku Dhintay Dhul Gariirkii ku Dhuftay.